Ra’isul Wasaare Rooble oo kulan la yeeshay Madaxda FESOJ – Bandhiga
Xoghayaha Isutagga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ Maxamed Ibraahim Macalimow iyo madaxa Tababarka FESOJ Faarax Nuur ayaa maanta kulan kula qaatay Villa Soomaaliya Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
FESOJ ayaa la wadaagtay Ra’isul Wasaaraha xaaladaha kala duwan ee warbaahinta iyo Saxafiyiinta ugu howlgalaan dalka, waxaana ay ka dalbatay in xukuumadiisa ay wadashaqeyn dhaw la sameyso warbaahinta maadama xili doorasho uu dalka galayo.
Xoghaye Macalimoow ayaa Ra’isul Wasaare Rooble uga war bixiyay tacadiyadii kala duwanaa ee xukuumadii Xasan Cali Kheyre u geysatay warbaahinta iyo wariyasha la dilay iyagoo shaqadooda ku jira kuwaa oo wali wax cadaalad ah aan helin.
FESOJ ayaa si gaar ah uga dalbatay Ra’iisul Wasaare Rooble in wariyehasha loo fududeeyo la soco shada iyo ka waramidda doorashooyinka.
Maxamed xuseen rooble ayaa sheegay dhankiisa in waarbaahintu dhankeeda ay saaran tahay masuuliyad weyn loona baahan yahay in ay sheegaan xaqiiqooyinka dhabta ah ee jira si madax bannaan balse aaney male-awaal iyo ku yiri kuyeen sal aan laheyn aaney wax ku marin habaabin . waxa uu tusaale u qaatay in uu arkay website-yo wax ka qoraya goob uu ka hadlay oo umadda u gudbinaya wax ka duwan wixii uu sheegay oo duuban ,lana heli karo.